राष्ट्रियसभा निर्वाचन : नौ दलका ८३ उम्मेदवार, को-को भए १७ जना निर्विरोध ? « News24 : Premium News Channel
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : नौ दलका ८३ उम्मेदवार, को-को भए १७ जना निर्विरोध ?
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुने ५६ सिटका लागि ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेदवारहरूले बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
प्रदेश १ को मोरङ, प्रदेश २ को धनुषा, प्रदेश ३ को ललितपुर, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्र्खेत र प्रदेश ७ को डोटीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिएको छ।आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
सातै प्रदेशमा शान्तिपूर्ण रूपमा मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।